မျက်လုံး သည် ခန္ဓာကိုယ် ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပြီး အမြင်အာရုံ ရရန် သုံးသည်။ ၉၇ ရာခိုင်နူန်းသော တိရိစ္ဆာန် များတွင် မျက်လုံးရှိကြသည်။
အချို့တိရိစ္ဆာန် များ သည် လူတို့မမြင်နိုင်သော အလင်းရောင်ခြည်များ ကို မြင်ရသည်။ ဥပမာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် သို့မဟုတ် အနီအောက်ရောင်ခြည် ဖြစ်သည်။
စုပေါင်းမျက်လုံးစနစ် သည် အခြေခံမျက်လုံးစနစ် နှင့် ကွာခြားသည်။ ၎င်းတွင် အလင်းအာရုံခံ အစိတ်အပိုင်း များစွာ ပါဝင်သည်။ အချို့တွင် ရာထောင်ချီ၍ ပါဝင်သည်။ ဖမ်းယူသော ပုံရိပ်ကို ဦးနှောက်သို့ အတူတကွ ပို့ဆောင်သည်။ ၎င်းကို အိုမတီဒီယမ် (ommatidium) ဟုခေါ်သည်။ အိုမတီဒီယမ် များသည် အခုံးမျက်နှာပြင်တွင် တည်ရှိ၍ ၎င်းတို့သည် နေရာ အရပ်ရပ် သို့ စူးစိုက်ကြည့်ရူနေသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေခံ မျက်လုံးကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ မြင်ကွင်းအတော်များများကို မြင်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် လျှင်မြန်သော လှုပ်ရှားမှု ကိုသာမက ဖြတ်ကနဲ ကဲ့သို့ အလင်းကိုပါ အာရုံခံနိုင်သည်။
↑ Frentiu, Francesca D.; Adriana D. Briscoe (2008), "A butterfly eye's view of birds", BioEssays 30: 1151, doi:10.1002/bies.20828 Cite uses deprecated parameters (help)
↑ Fernald, Russell D. (September 2006), "Castingagenetic light on the evolution of eyes", Science 313 (5795): 1914–1918, PMID 17008522, doi:10.1126/science.1127889 Cite uses deprecated parameters (help)
↑ Völkel R.; Eisner M.; Weible K. J. (June 2003). "Miniaturized imaging systems" (PDF). Microelectronic Engineering 67-68 (1): 461–472. doi:10.1016/S0167-9317(03)00102-3.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျက်လုံး&oldid=406843" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၈:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။